Uyenza njani iakhawunti yeApple yomntwana usebenzisa Ukwabelana ngoSapho | IPhone iindaba
Iindaba ze-IPad | | iCloud, Izifundo kunye neencwadana
I-iPad sisixhobo sosapho lonke, kwaye njengokuba abantwana bekhula baqala ukuyisebenzisa njengesixhobo semfundo ukufikelela kumxholo ohambelana neencwadi zesikolo eziqhelekileyo. Ekhaya ubuncinci sifikelele kwinqanaba apho i-iPad sele iyipropathi yabantwana abancinci endlwini, kwaye ukuba neakhawunti yakho ye-iCloud emiselweyo kuyo sele kungasebenzi, kwaye kuyingozi. U-Apple akabavumeli abantwana abangaphantsi kwe-14 ukuba benze iiakhawunti ezizimeleyo, kodwa iyabavumela ukuba bakhethe ukhetho "losapho".. Unokwenziwa njani umntwana iakhawunti? Zeziphi iinzuzo zokuyenza? Ungazilawula njani iinkqubo ezikhutshelweyo? Siza kukubonisa konke oku kungezantsi.
1 Kutheni uyila iakhawunti yomntwana?
2 Uyenza njani iakhawunti yeApple yomntwana?
3 Izibonelelo zoSapho
Kutheni uyila iakhawunti yomntwana?
Ngaphezulu kwako konke ukukhusela kwakho. Ungalibali ukuba yonke idatha yakho, abafowunelwa, iikhalenda, imeyile, njl. Ukubeka konke oku kufikelela emntwaneni akucetyiswa kuba kunokubangela umonakalo. Utshintsho olwenzayo kwisixhobo esixhumeke kwi-iCloud luvumelaniswa ngokuthe ngqo kuzo zonke izixhobo zakho, ke ukuba ngempazamo ucime umnxibelelwano, uya kulahleka kwangoko kuzo zonke izixhobo zakho, kwaye ngekhe wazi.
Kodwa kukwakhona notyalo-mali kwixa elizayo », kuba umntwana wakho uya kuba nakho ukuzenza ngedatha yakhe egcinwe kwiakhawunti yakhe. Iintandokazi zakho zeSafari, iakhawunti ye-imeyile katitshala, imidlalo yakho kwiZiko leMidlalo. Kutheni le nto kufuneka adlale esebenzisa umdlalo wakho weClash of Clans? Ukuba unelali yakhe ukusukela ngoku kwaye kwaye ngale ndlela akazukuphanga nantoni na, angakubetha nakwiimfazwe.
Uyenza njani iakhawunti yeApple yomntwana?
Into yokuqala kukuba kwenziwe iakhawunti yosapho. Kule akhawunti, umntu nguye oququzelela yonke into, kwaye lowo ubeka ikhadi lekhredithi. Zonke ezinye zongezwa kwiiakhawunti ezabelana ngendlela yokuhlawula, kwaye ezinokuthi zithintelwe, kodwa siza kuyibona kamva. Ngoku siza kubona ukuba ungongeza njani umntwana kwiakhawunti yosapho. Ukwenza oku kuya kufuneka ungene kuseto> iCloud kwaye ngezantsi nje kweakhawunti yakho cofa ku "Kusapho". Ukuba sele unelungu, liza kuvela apho, kwaye awunawo umntu, ungongeza nabani na omfunayo:
Kwimeko apho ingumntu oneakhawunti ye-Apple esele iqulunqiwe, kuya kufuneka ubameme kuphela usebenzisa i-imeyile yabo, ehambelana neakhawunti yabo. Ukuba uyasamkela isimemo, siza kuba sele sikwiakhawunti yosapho lwakho.
Ukuba awunayo iakhawunti, kwaye ukwangumntwana (umzekelo wethu), kuya kufuneka uyenze kwasekuqaleni, ekuya kufuneka siyenzele iakhawunti ye-imeyile ye-iCloud kwaye sibonakalise ubudala bomntwana.
Iinkcukacha ezimbini ezibalulekileyo koluqwalaselo: Kuya kufuneka ulungiselele ukuba ngubani onokugunyazisa ukuthenga ngabantwana kwaye ngubani ongakwaziyo. Abo banokubagunyazisa baya kuba "ngabazali / abagcini", abanye baya kuba nje "ngabantu abadala". Ukwenza oku, ngenisa ilungu ngalinye losapho kwaye wenze okanye ucime iqhosha "Umzali / uMgcini". Umgcini weakhawunti uya kuhlala enguMzali / uMgcini. Enye inkcukacha ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukuba ngaba sifuna abantwana ukuba bakwazi ukucela ukuthenga okanye hayi. Ukuba kunjalo (iqhosha lisebenza) baya kuba nakho ukuthenga usetyenziso, simahla okanye bahlawule, kodwa ugunyaziso lomzali okanye lomgcini luya kufuneka. Into elungileyo kukuba ubukele le vidiyo ingezantsi ukuze ubone ukuba isebenza njani.
Ukuba namalungu ongezwe kwiakhawunti yakho ye-En Familia kuthetha ukuba ngamnye wabo uya kuba nakho ukufumana iakhawunti yakhe ye-Apple kunye ne-iCloud kwisixhobo sabo, kunye nedatha yabo, kodwa uya kuba nakho ukwabelana ngokuthengwe ngumnini. Oko kukuthi, ukuba uthenge isicelo akuyi kufuneka uhlawule kwakhona xa usikhuphela. Baza kuba nakho ukusebenzisa iakhawunti yosapho yoMculo weApple, kwaye nge € 15 ngenyanga amalungu eakhawunti yakho yoSapho aya kuba nakho ukonwabela inkonzo yomculo kaApple. Ngoku kuya kufuneka uhlengahlengise izithintelo zobudala be-iPad yakho ukuze ukwazi ukuzola kwaye uyazi ukuba abazukufikelela kwizinto ezingalunganga ngokweminyaka yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iCloud » Uyenza njani iakhawunti yeApple yomntwana usebenzisa Ukwabelana ngoSapho
UJose Antonio Llorca Sanchez sitsho
Ndingasusa njani ilungu kuKwabelana ngoSapho? Ndenze into embi kwaye kufuneka ndiyisuse. Enkosi.
Phendula kuJose Antonio Llorca Sanchez
Ukusuka kwimenyu efanayo yokumisela ungazicima.
Ngaba unokwenza iakhawunti yabantwana kwi-iphone 6 ene-iOS 11?
Kuba mna nentombi yam ndibeke umhla wokuzalwa kwakhe, kodwa awuphumi ngokulandelayo ...
Ukuba uza kuba nakho ukuyenza, mhlawumbi ibikukungaphumeleli okuthile. Zama emva kweeyure ezimbalwa.
I-Night Shift ayinakuphinda isebenze kunye neSiri kwimodi yokugcina amandla